Rugby – «Top 6 Aroi 2019»: tafaraka amin’ny Etang Salé ny FTM | NewsMada
Rugby – «Top 6 Aroi 2019»: tafaraka amin’ny Etang Salé ny FTM
Dingana manaraka ho an’ny baolina lavalava malagasy, ny fiatrehana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina “Top 6 Aroi 2019”. Hiatrika izany, ny FTM Manjakaray sy ny Cosfa. Efa fantatra avokoa ireo hifanandrina aminy.
Tontosa, ny alatsinainy lasa teo ny antsapaka, hizarana vondrona ireo ekipa 6 hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina, taranja rugby na ny «Top 6 Aroi 2019». Tafara-bondrona amin’ny ekipan’ny Etang-Salé Rugby Club, La Réunion indray mantsy ny FTM Manjakaray (Dakar).
Ity ekipan’i La Réunion ity no nanakana ny lalan’ny Dakar, tsy hiatrika ny lalao famaranana, tamin’ny taon-dasa. Raha tsiahivina, nisaraka ady sahala, 20 no ho 20, ny roa tonta, nandritra ny lalao mandroso, tetsy Mahamasina, ary lavon’ny Reonioney, tamin’ny isa, 14 no ho 13 kosa teo amin’ny fihaonana miverina, tatsy La Réunion.
Hanala vela, amin-dry zareo Etang-Salé indray izany amin’ity ny FTM Manjakaray. Tsiahivina, fa ity ekipan’ny Etang-Salé ity, no nandrombaka ny andiany voalohany, tamin’ity «Top 6 Aroi», ity. Miaraka amin’ny FTM Manjakaray ao amin’ny vondrona “A”, ny Desperados Rugby Club M’tsapéré, avy atsy Mayotte.
Ao amin’ny sokajy “B” kosa ny Cosfa, tompondakan’i Madagasikara 2018. Miara-dalana aminy ny Rugby Club St Pierre, avy atsy La Réunion ary ny Blues Curepipe Starlight avy atsy Maorisy.
Maozatra ny miandry ny ekipa malagasy amin’ity. Mafy avokoa mantsy ireo mpifanandrina, na ho an’ny FTM izany, na ho an’ny Cosfa. Ao anatin’ny tanjany sy ny heriny tanteraka mantsy ny baolina lavalava atsy La Réunion, amin’izao fotoana izao ary efa tena mivoatra be. Mila fiomanana mafy, araka izany, raha te handrombaka ny fandresena. Tsy mbola nivoaka ny fandaharan-dalao, amin’ity. Mety hiova mantsy ny “formule”, hitondrana ny fifaninanana, amin’ity, fa tsy ho toy ny tamin’ny taon-dasa.
Hanomboka ny volana marsa 2019, ity “Top 6 Aroi 2019”, andiany faharoa ity.